China Chain conveyor fekitori uye vagadziri | Yuantuo
Iyo cheni yeplate conveyor ndeyekuisa ndiro dzeplate pakati pemaketani pamativi ese emaketani epaketani, kuitira kutakura zvinhu zvisina kujairika. Iyo yakasarudzika yechigadziko yakaiswa pane cheni ndiro. Zvinoenderana neanoda maindasitiri ekudzora zvinodiwa, inogona kushandiswa seyakaunganidzwa mutsetse, uye inogona kuona iyo bend kuendesa. Main tekinoroji parameter yeketani yekufambisa: 1. Chain pani: Standard conveyor cheni 2. Upamhi hweplate cheni: 200-1200mm 3. Inotaridza kumhanya: 0.5m / min-15m / min 4. Conveyi ...
Iyo cheni yeplate conveyor ndeyekuisa ndiro dzeplate pakati pemaketani pamativi ese emaketani epaketani, kuitira kutakura zvinhu zvisina kujairika. Iyo yakasarudzika yechigadziko yakaiswa pane cheni ndiro. Zvinoenderana neanoda maindasitiri ekudzora zvinodiwa, inogona kushandiswa seyakaunganidzwa mutsetse, uye inogona kuona iyo bend kuendesa.
Main technical technical parameter emaketani anotakura:
1. Chain cheni: Yakajairwa conveyor cheni
2. Upamhi hweketani yeplate: 200-1200mm
3. Kuendesa kumhanya: 0.5m / min-15m / min
4. Kuendesa kugona: 2500kg / M
5. Kushanda tembiricha yesimbi inoendesa ndiro yeketani: - 20 ℃ - 400 ℃
Iyo furemu yecheni yeplateti yekutakura inonyanya kugadzirwa nesarbon simbi kana simbi isina simbi, uye macheni emaketani ezvisikwa akagadzirwa nezvinhu zvakasiyana.
Stainless simbi cheni yeplate conveyor imhando yekutakurisa chishandiso ine yakajairwa cheni ndiro seyakatakura pamusoro uye mota yekudzora semagetsi kufambisa. Iyo cheni yeplate conveyor inoumbwa nemagetsi edhiraivhu (mota), shaft shaft, roller, tensioning mudziyo, sprocket, cheni, kutakura, girisi, cheni yeplate, nezvimwe. Zvikamu zviviri zvikuru zvezvipfuyo zvinoratidzira ndeizvi: cheni, iyo inopa simba rekusuduruka. nekufamba kwayo kwedenderedzwa; simbi ndiro, inova inotakura munzira yekuburitsa. Matafura emaketani emaketani anogona kushandiswa mukufanana kuita kuti cheni yeplate conveyor yakafara uye kugadzira kusiyanisa kumhanya Nekushandisa iyo yekumhanyisa mutsauko wemazhinji mutsara maketani emaketani, akawanda mitsara irikupa inogona kushandurwa kuita imwechete mutsara kuendesa pasina extrusion, kuitira kuti usangane nezvinodiwa zve imwechete mutsara kuendesa chinwiwa kunyorera, kuzadza, kuchenesa uye zvimwe zvigadzirwa. Tinogona kugadzira musoro nemuswe wemaketani maviri emaketani ekuisa mukati kuti uwirirane neketani yakavhenganiswa, kuitira kuti bhodhoro (rinogona) muviri ripatsanurwe Mune mamiriro ekushanduka kwesimba, hapana chinhu chakasara mumutsara wekuburitsa, unogona kusangana nezvinodiwa bhodhoro risina chinhu, izere bhodhoro kumanikidza uye hapana kumanikidzwa kuendesa.
Pashure: bhandi rekutakura
Zvadaro: munyonga conveyor
Electric Conveyor Bhandi
Yakarerekera Belt Conveyor
Mobile Yekufambisa Belt